Ololaha Talaalka Xoolaha oo Muqdisho lagu daah furay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ololaha Talaalka Xoolaha oo Muqdisho lagu daah furay
Ololaha Talaalka Xoolaha oo Muqdisho lagu daah furay
Shirkani oo aay soo qabanqaabisay wasaradda Xanaananada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Soomaliya ayaa ahaa mid lagu daahfurayay Ololaha Talaalka Xoolaha ee cudurada jadeecada iyo furuqa oo intabada xoolaha ku dhaca Qaabka loo gaarsiinkaro dhanka miiga ee gobolada dalka Soomaliya.
Qaar kamid ah wasiirada Xanaanada Xoolaha maamul goboleedyada dalka dhaqaatiir ajaanib ah iyo dhaqaatiirta xirfadleyda ayaa ka soo qeyb galay, iyadoona shirka daahfurka ololaha talaalka lagu qeexay in dalkeena u yahay mid ku tiirsan xoolaha, loona bahan yahay in ahmiyad gaar ah lasiiyo caafimaad qabka xoolaha.
Ibraahim Cabdi Xasan wasiir ku xigeenka Xanaanada Xoolaha Dowlad goboleedka Jubbaland oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan aay soo dhaweynayaan ka warqabka caafimaadka xoolaha, waxaana uu u mahad celiyay dhaqaatiirta isku hoowshay.
Dr Nuurta Shiiq Maxamuud oo kamid ah dhaqaatiirta xirfadleyda Xanaanada Xoolaha ayaa sheegtay in ololaha talaalka uu sahli karo in lahelo xoolo caafimaad qabo, islmarkaana fududeyn kara in lahelo iibka xoolaha la dhoofiyo.
C/kariin khaliif Dhalac wasiir ku xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta Daaqa oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ololaha talaalka lagaarsiinayo gobolada dalka ay kala sheqeyn doonaan dhaqaatiirta xirfadleyda Xanaanada Xoolaha, kaasi oo socon doona muda laba bilood ah.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa xukuumada Soomaliya ayaa sanadkiiba labo jeer sameysa talaalka caafimaad qabka xoolaha, madaama dalkeena uu yahay mid ku tiirsan xoolaha.
Previous articleGuddiyada Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare oo maanta Muqdisho ku kulmay
Next articleMaxkamadda sare ee dalka oo war ka soo saartay muddada Gar-sugenimada Maxbuuska